आज, तल्ला coverings रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न सामाग्री को एक विशाल संख्या छन्। तर बिछाउने गर्न यो पूर्ण चिल्लो बनाउने, तपाईं अग्रिम एक आधार तयार गर्न आवश्यक यो हुनु पर्छ ठाउँ लिए। यस लेखमा के कुरा हुनेछ कास्टिंग तल्ला आत्म-leveling यौगिकों।
निस्सन्देह, तपाईं सबै कुरा पुरानो जमानाको तरिका गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, बस बेकन राख्नु र एक साधारण सिमेन्ट सतह भर्न आवश्यक छ। तर प्रक्रिया गाह्रो र लामो समयसम्म छ। धेरै मानिसहरू जो धेरै लाभ छ विशेष मिश्रणों, गर्न Resort रुचि किन छ।
तल्ला भर्न आत्म-leveling यौगिकों हालै मात्र सम्भव भएको छ। आधुनिक सामाग्री प्रयोग आधार तयार गर्न जो फर्श को स्थापना धेरै सजिलो भएको छ लागि अवसर को एक किसिम प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, यस्तो यौगिकों गुणस्तर पूर्णतया पछि तल्ला finishes लागि आवश्यक हो जो सबै आवश्यकताहरू पूरा भएको छ।
आत्म-leveling तल्ला को एक मिश्रण घनघोर द्वारा गरिनेछ अघि, तपाईं आफ्नो संरचना बारेमा थप जान्न आवश्यक छ। यो मिश्रण सिर्जना गर्न प्रयोग सामाग्री यसको सञ्चालनको अवस्था निर्भर हुनेछ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यसैले, खरीद विशेष ध्यान संग नजिक हुनुपर्छ।
यसको संरचना मा जिप्सम, सिमेन्ट वा पलिमर को एक मिश्रण शामिल हुन सक्छ। एक ठूलो मोटाइ आवश्यक छ भने, अपार्टमेन्ट को कास्टिंग तल्ला सिमेन्ट आधारित थियो जो समाधान, को माध्यम द्वारा गर्नुपर्छ। गुणस्तर सुधार गर्न एक तह लागू गर्नुपर्छ। यो पलिमर बनेको छ जो एक मिश्रण, समावेश हुनेछ।
एक आधार पत्र को पङ्क्तिबद्ध गर्न अघि बढ्नु अघि देखि एक विशेष प्राइमर लागू गर्न आवश्यक छ। यसलाई पछि आत्म-leveling तहहरू संग आसंजन सम्पत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ। यसको संरचना मा प्राइमर मात्र सामाग्री सब्सट्रेट गर्न पछि तहहरू को राम्रो आसंजन प्रचार कि बाध्यकारी छैन। पनि Fungi र जीवाणुहरु को उद्भव रोक्न भनेर विभिन्न प्राइमर antiseptics प्रयोग पदार्थ को उत्पादन मा।
कुनै एक थप आर्थिक विकल्प खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सतह सुख्खा छ र कुनै चर्किएको छ जब यो प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा, एक प्राइमर मिश्रण रूपमा equalization लागि नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिले यो काम समाधान तयार गर्दा भन्दा धेरै ठूलो हदसम्म पानी संग पतला गर्नुपर्छ।
तल्ला आत्म-leveling यौगिकों ध्यान तयार सब्सट्रेट अन्तर्गत बाहिर हुनुपर्छ भर्नुहोस्। यो सबै त्यहाँ सतहमा छ भने यो मलबे, तेल पदार्थ, रंग एजेन्ट र यति मा। डी स्पष्ट हुनुपर्छ, यो छुटकारा गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, आधार ड्राई हुनुपर्छ। भर्नको अघि प्राइमर को एक कोट आवश्यक छ। यो एक रोलर वा ब्रश संग गर्न सकिन्छ। आदर्श, यी तहहरू दुई हुनुपर्छ। आफ्नो आवेदन छोटो पज गरिनु पर्छ समय सब्सट्रेट पहिलो पत्र समातेर गर्न अनुमति। दोस्रो पत्र आवेदन पछि पनि चार घण्टामा एक ब्रेक लिन आवश्यक छ। तर पनि भर्ने इच्छित प्रभाव को दिन प्राप्त गर्न सक्षम हुने छैन, किनभने आवश्यक छैन ढिलाइ।
समाधान तयार गर्दा तपाईं प्याकेज आएका निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक छ। यसलाई समाधान सुक्खा र सफा हुन formulated छ जसमा कन्टेनर बुझे गर्नुपर्छ। गांठ हटाउन, सुक्खा मिश्रण बिस्तारै पानी थपियो र एक विशेष चुच्चो संग एक ड्रिल संग हलचल हुनुपर्छ। समय मिश्रण निर्देशनहरू को आवश्यकताहरु आधारित चयन गर्नुपर्छ।
भर्न पाँच पत्र मिलिमिटरमा भन्दा पतली हुँदैन। यसलाई पूरा भएपछि, laminate पत्र अवश्य रोलर हावा बुलबुले को छुटकारा गर्न। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, आफ्नो हातमा आत्म-leveling तल्ला छैन यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ ताकि गाह्रो गर्छन्।
Peskobeton M300 खपत। peskobeton M300 प्रवाह को गणना
प्रति 1m2 Bituminous खपत, अनुप्रयोग प्रविधि
बालुवा मा फर्श slabs बिछाउने को प्रविधि के हो?
जमीन तल्ला के हो?
आफ्नो हातले Ebb छत। छत मा ज्वार कसरी बनाउने
क्याम्मिता नयाँ शैली वा जीवनको मार्ग हो?
ब्रेक सिस्टम: उपकरण र सञ्चालनको सिद्धान्त
उन्माद: विकास सुविधा र रोगहरु को उपचार
को चिबुक दुखेको कान के छ भने
विभिन्न ऐतिहासिक मा ब्वाँसो प्रतीक अवधि
गद्य मा जन्मदिन अभिवादन - यो कविता राम्रो वैकल्पिक
म्यान्टिस क्षति वा छैन?
कार्लोस Strandberg - नव आगन्तुक CSKA
अफ्रिका र आफ्नो विविधताको प्राकृतिक क्षेत्रमा